Gif Camera For Android ~ မိုးညိုသား
1:24 AM Android Apk 1 comment
Android ဖုန်းနဲ့ အပျင်းပြေ ကလိချင်တဲ့သူတွေအတွက် Gif Camera လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Animate လေးတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လုပ်ပြီးသားတွေကို Email, facebook တို့ကိုရှယ်နိုင်သလို သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ SMS နဲ့ပို့နိုင်ပါသေးတယ်..
Make GIF : Capture the funny moments of your friends,family and pets by GIF Camera,and save it to animated gifs;Funny GIFs : GIF Camera is your daily source for funny gifs and funny animated pictures! Large collection of the best new gifs!
Download Link >> ( Zippyshare : Mediafire : TusFiles )